Home Wararka Madaxweyne Gaas”Wax wada hadal ah kama Gali doono Dagaala ka Socda Tukaraq’
Madaxweyne Gaas”Wax wada hadal ah kama Gali doono Dagaala ka Socda Tukaraq’
C/wali Maxamed Cali (Gaas) madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sheegay in aysan marnaba wax wada hadal ah ka gali doonin xiisada dagaal ee la taagan deegaanka tukaraq ee udhaxeysa maamulasa Putland iyo Soomaaliland.
Madaxweyne C/wali Gaas ayaa waxuu tilmaamay sababta uu maamulka uu u aramiyo ay udiidanyihiin wadahadlka waxuuna ku sheegay inay tahay in ciidamada maamulka Somaaliland ay gacanta ku hayaan deegaano katirsan Putland, waxuuna xusay in ilaa deegaanadaaasi ay ka saarayan aysan wada hadal gali doonin dagaalkana uu socon doono.
Sidookale Gaas ayaa ka dhawaajiyay in mar walba ay duulaanka soo qaadan ciidanka Soomaaliland, waxuuna xusay in wada hadal uusan imaankarin inta dhulka ay putland leedahay ay ku sugan yihiiin ciidamada Soomaaliland.
Hadalka Gaas ayaa imaanaya xili deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ay wali isku hor fadhiyaan waxaana saacad walba lafilan karaa dagaal iyadoona maalmihiiii danbe ay madaxda labada maamul hawad isku marinayayen erayo xanaf leh.
Previous articleMuqtaar Rooboow oo Shaacinaayo in uu yahay Musharax u Taagan qabashada xilka Madaxweyne Ee Maamulka K/Galbeed (Natiijo Ceeynkee ah ayuu Fili Karaa)
Next articleMaamulka Putland Oo Sheegay in khilaaf Kala dhaxeeyo wasaaradda Kalluumeysiga
Muqdisho Online - Xafiiska wararka ee Gobolka Banaadir. Waxaad nagala soo xiriir kartaa muqdis[email protected] ama twitter @muqdisho_online
Kooxo hubaysan oo Dil iyo dhac G/ SH/Dhxe ugu gaystay Gaari...
Guddiga doorashooyinka Qaranka oo Xarun ka furanaya Galmudug